Electrostatic ဖုန်မိုးကြိုးစက် Electrostatic ဖုန်မိုးကြိုးစက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Purus tek. Corp Ltd 1990 ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝသောလက်ဆောင်တွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်, ငါတို့ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးမှဆက်စပ်သည် Electrostatic ဖုန်မိုးကြိုးစက် နောက် ... ပြီးတော့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခွက်တဆယ်နှင့်ဤလယ်ပြင်၌အတွေ့အကြုံကောင်းအပေါ်အားကိုးကျနော်တို့ကအလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုရရှိဖို့နဲ့မှာအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများတစ်ဦးအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. ပါပြီ Taiwan.
၎င်းသည်ညစ်ပတ်သောအမှုန်များကိုလေထဲမှဖယ်ထုတ်ရန်လျှပ်စစ်သုံးနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်,99 ကိုသတ်ပစ်%ဘက်တီးရီးယားနှင့် 99 ဖယ်ရှားလိုက်ပါ%PM2.အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောလျှပ်စစ်မီးမှတဆင့် 5.ဖြည့်စွက်ကာ,ဒါကြောင့်ထိရောက်စွာဓာတ်မတည်တိုးတက်စေနိုင်သည်,ဖုန်မှုန့်,မီးခိုးမြူ,ဆေးလိပ်,လေထုထဲတွင်ဝတ်မှုန်နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများ.ကိုယ်ပိုင်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများမှကြီးမားသောအိမ်များအထိအရွယ်အစားများရနိုင်သည်.လျှပ်စစ်သန့်စင်စက်သည်အလွန်တိတ်ဆိတ်နေသည်,ဒါကြောင့်အိပ်ခန်းထဲမှာအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်,လေ့လာချက်,ဧည့်ခန်း,ကလေးများ'အခန်း,ကားနှင့်အခြားနေရာများ.
electrostatic air cleaner သည် filter screen ကိုပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ,အရာအသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေခြင်းနှင့်အလိုလိုသိသည်.
ထုတ်ကုန်များသည်အိုဇုန်းလွှာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းအဆင့်ဆင့်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်,နှင့် NCC လက်မှတ်ရှိသည်,အားလုံးအမျိုးသားရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်.
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကအားပြန်သွင်းနိုင်ပါတယ်,plug-in,USB power supply သည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပူးပေါင်းနိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.smallairpurifier.co/my/electrostatic-dust-precipitator.html
အကောင်းဆုံး Electrostatic ဖုန်မိုးကြိုးစက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Electrostatic ဖုန်မိုးကြိုးစက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ